Rihanna Oo Xaflad U Dhiganayso Dib U Helidii Jaceylkeda Chirs Brown - iftineducation.com
Rihanna and Chrisbrown
iftineducation.com – War ay soo daabacday maanta Jariirada The sun ayaa lugu sheegay in Fanaanada Caanka ah ee Rihanna ay dhiganayso xaflado iyo casuumaadyo ay ugu dabaal dagayso dib u hiltaankii Chirs Brwon oo ahaa ninkii degay qalbigeeda .
Fanaanada iyo jacaylkeeda oo iminka ku sugan Dalka ka mid ah Wadamada dhaca Qaarada Africa ayaa la sheegay in aay ka dhawaajisay in ay ku faraxsan tahay in ay hesho jacaylkeeda muda ay ku jahawareesaneed .
Labadaa Lamane ayaa dhwaan tagay Abijaan si halka ay bandhig ugu qabtaan hayeeshee bandhigii ay ku qabteen garoonkii kubadda Cagta abijaan ayaa waxaa ku naf wayay 75 ruux dad kor u dhaafay kidib markii ay is buurteen halka tira intaa ka badana ku dhawaacantay .
Fanaanada ayaa muda ku jaha wareesaneed in jacaylka ay u qaaday fanaanka rabistaha ah waxa ayna mudo la murugaysneed kidib markii ay soo baxeen warar la xariira in uu nolal kale samaystay .
Daawo Beyonce Oo iska doondooneysa Staylkii Michael Jackson